चौथो टेस्टमा अष्ट्रेलिया विजयी
२३ भाद्र, काठमाडौँ । इंग्लान्ड र अष्ट्रेलिया बिचको चौथो टेस्टमा पहिले टस जित्दै अष्ट्रेलिया ले ब्याटिङ्ग रोजेको थियो ।
पहिले ब्याटिङ् गरेको अष्ट्रेलिया ले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन । डेविड् वार्नर ० रनमै स्टुअर्ट ब्राँडको सिकार हुन पुगेका थिए । त्यसपछि अष्ट्रेलियाले आफ्नो दोस्रो विकेट २८ रनमा गुमाउन पुग्यो । त्यसपछि ब्याटिङ्ग गर्न आएका स्टीवन स्मिथले फेरि पनि सानदार इंनिग खेले । उनले यो श्रृंखलाको दोहोरो सतक बनाउने पहिलो खेलाडी पनि बनेका छन् । उनले ३१९ बल खेल्दै २११ रन बनाउन सफल भए । स्टिवन स्मिथको दोहोरो सतकको मद्दतले अष्ट्रेलियाले ४९७ रनमा आफ्नो पहिलो पारीको घोषणा ग¥यो ।
इंल्यान्डका लागि भने बलिङ्गमा सबै भन्दा सफल स्टुअर्ट ब्राँड बने । उनले ३ विकेट लिन सफल भए । इंल्याण्डले पनि आफ्नो पहिलो इंनिगको सुरुवात राम्रो गर्न सकेन । इंल्यान्डले २५ रनले आफ्नो २ विकेट गुमाएको थियो । त्यसपछि इंल्यान्डको पारि रोरी बन्र्स र जो रुटले समाले ।
रोरी बन्र्स ८१ रनमा आउट हुन पुगे भने जो रुट ७१ रनमा आउट भए । इंल्यान्डले आफ्नो पहिलो पारिमा ३०१ रनमा अल आउट भयो ।
अष्ट्रेलियाले आफ्नो दोस्रो परिमा पनि राम्रो सुरुवात गर्न सकेन । अष्ट्रेलियाले ४४ रनमा ४ विकेट गुमाएको थियो । त्यसपछि स्टीवन स्मिथले फेरि पनि अष्ट्रेलियाको ब्याटिङ्लाई समालेका थिए । उनि ८२ रन बनाएर आउट हुन पुगे । अष्ट्रेलियाले आफ्नो पारि १८६ रनमा घोषणा गर्दै इंल्यान्डलाई जितको लागि ३८३ रनको लक्ष्य थीयो ।
अष्ट्रेलियाले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इंल्यान्ड १९७ रनमा अल आउट भयो । अष्ट्रेलियाले १८५ रनको जित सँगै ब्कजभक पनि च्भतबष्ल गरेको छ ।
यी हुन टि–२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने ५ खेलाडी
०५ फागुन, काठमाडौँ । टि–२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको सबै भन्दा छोटो…
आईपिएलकोे खेल तालिका सार्वजानिक, सन्दिप आवद्ध टिम दिल्ली क्याापिटल्सको कहिले कहिले छ त खेल ?
०४ फागुन, काठमाडौँ । आईपिएल २०२० को खेल तालिका सार्वजानिक…
होमलाल श्रेष्ठले हात पारे प्रधानसेनापति म्याराथनको उपाधि
म्यान्चेस्टर सिटीमाथि प्रतिबन्ध
यी हुन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने ५ खेलाडी
यी हुन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका लागि सर्वाधिक विकेट लिने ३ खेलाडी
नेकपाको प्रवास कमिटीले पूर्णता पायो, हेर्नुहोस् कुन देशको नेतृत्व कस्ले गरे त ? १ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़